Boliviana Mpitoraka Bilaogy Manome Ny Didim-pitsarany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 11:47 GMT
Tamin'ity indray mitoraka ity, tamin'ny taona lasa teo, nitabataba momba ny fanokanana ny filoha Evo Morales ary ny vaovao farany momba izany i Bolivia sy ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao. Miaraka amin'ny taham-pankasitrahana tonga amin'ny lenta avo dia avo, maro ireo nanontany tena ary feno fanantenana momba ny taona ho avy. Hanaraka ny fampanantenany rehetra nandritra ny fampielezankevitra ve izy? Nanomboka hatreo, nijery ireo fiovana tsara sy ratsy nataon'ity governemanta vaovao ity ireo mpitoraka blaogy. Bilaogy maro no nipoitra ho mpitsikera mazava an'ity fitantanana ity, raha ny hafa kosa nanohy niala ny politika.
Manoratra tsindraindray momba ny politika ao amin'ny bilaoginy Río Fugitivo [ES] i Edmundo Paz Soldán, Boliviana mpanoratra nahazo loka. Na izany aza, dia nohararaotiny ny fahafahana miresaka momba ny zava-bitan'i Morales nandritra ny taona voalohany nitondrany sy ny fomba nanaporofoany fa somary nandiso fanantenana ilay izy, taorian'ity fahatsapana feno fanantenana ity.
Herintaona taty aoriana, mazava tsara fa mbola miandraikitra ny Lapan'ny Burned (anaran'ny lapan'ny filoham-pirenena) ilay mpitarika sendikaly ary ireo fanovàna lalina ara-politika, ara-tsosialy ary ara-toekarena natosiky ny governemantany – ny fanovàna ho orinasam-panjakana ny solika, fanavaozana momba ny fambolena, ny fitomboan'ny fampivangongoana fahefana – izay nandramana natao tamin'ny fomba jadona, tsy misy dikany ary tsy manaiky ny tsy fitoviam-pijery na izay rehetra endrika fanoherana. Mazava tsara ny tetikasa politikan'i Evo sy ny MAS – hametraka ny fahambonian'ny fandalàna vahoaka mifamatotra amin'ireo vazimba teratany.
Ao anatin'ny fikatsahany fahefana amin'ny fomba rehetra, nitarika ny fanavakavahana ara-poko ho an'ny Bolivia mizarazara i Evo sy ny filoha lefiny Garcia Linera. Efa nanome làlana sahady ho an'ny bala sy ny antsibe ilay fifandonana am-bava. Herintaona taorian'ny naha teo amin'ny fitondrana azy, ireo zava-bitan'ny fitondrana – ny fampidirana ireo vondrona voahilika hatry ny fahagola, ireo fifanarahana angovo mahasoa, ny fankasitrahana tsara momba an'i Shily ary ny fitomboan'ny fisehoana iraisampirenena – dia takon'ilay firehany voajanahary tsy mahay milefitra. Manao izay rehetra azony atao i Evo mba hahatonga mora foana ny fandresena ho faharesena. Soa ihany fa tsy miafara amin'ny fahatsiarovana azy ho toy ilay lehilahy izay nitondra an'i Bolivia ho any amin'ny ady an-trano.
Nanaitra ny mason'i Andres Pucci ny sasany amin'ity fampiasana kabary fandresena lahatra ity, indrindra ny fampiasana zazalahy folo taona hiditra ho anisan'ireo mpanohana azy. Mitaraina i Pucci, toy ny ataon'ireo mpamaky azy, hoe nampiasaina ho an'ny dokambarotra toy izany ilay ankizilahy. Manome ny heviny momba izany i Briegel Bush ao amin'ny Bolivia-Eclipse [ES]
Amin'ny ankapobeny, manana ny toetran'ny mpiavonavona ary mandà ny hevitr'izay tsy mifanaraka aminy i Morales. Araka ny fahitako dia tsy afaka nitàna ny andraikitra maha- filoham-panjakàna azy izy manoloana ny tombontsoan'ireo vondrona izay soloany tena. Ankoatra izany, nampiasa ilay kabary tsara lahatra mivatravatra manohitra ny “fahefana tazonin'olom-bitsy” izy ka tonga hatramin'ny hoe mihorohoro ny kilasy antonony.
Boliviana roa miteny anglisy mpitoraka bilaogy izay nanoratra momba ny politika any Bolivia nandritra ny taona maro ihany koa no nanome ny fomba fijeriny manokana tamin'ny taom-panatanterahana voalohany. Fintinin'i Miguel Buitrago ao ami'ny MABBlog ilay lahatenin'i Morales nandritra ny adiny efatra momba ny Firaisam-pirenena nanilihany ny mpanohitra, izay nanao diabe ho fanoherana. I Miguel Centellas ao amin'ny Ciao! dia mino fa ny vavan'i Morales no nampiditra azy tao anaty olana faran'izay goavana. Manome ohatra aminà hetsika sy fanambarana izay misy fiantraikany lehibe tsy azo amaivanina izy, toy ny fanomezana alàlana ny mpanolotsaina akaiky, izay karohina noho ny asa fampihorohoroana any Però ho anisan'ny mpikambana ao amin'ny manodidina azy. Tamin'ny farany, tonga taminà fehinkevitra iray i Centellas , “Evo sy ireo mpanohana azy akaiky dia tena mampalahelo fa tsy voaomana hitantana fanjakana maoderina” ary koa “toerana marefo i Bolivia, ara-politika. Tsy afaka mahazaka andiana krizy PR isan-kerinaindro (ary isanandro!) izay vao mainka haharatsy kokoa ny toe-draharaha. Tsy marim-pototra ny taona voalohan'i Evo. Antenaina fa amin'ny 2007, hahita mpanolotsaina matihanina izy izay afaka hampiofana azy sy ireo olona manan-danja hafa ao amin'ny MAS. “
Io vanim-potoana io ihany koa dia manamarika ny fankalazana ny Alasitas, fetibe iray izay efa tamin'ny vanim-potoana mialoha ny fanjanahantany ary anajàna ny sampy kely iray antsoina hoe Ekeko sy inoana ho manana fahafahana hanome harena sy vintana tsara. Ireo tranoheva napetraka ao afovoan'ny tanànan'i La Paz dia mivarotra dika mitovin'ireo fiara kely, mari-pahaizana, trano, antontam-bola Euro ary mivarotra entana maro hafa ireo mpivarotra. Mahatsiaro ity fetibe ity i Vania Balderrama, Paceña iray monina ao Santa Cruz. Araka ny voasoratra ao amin'ny bilaoginy, Capsula Del Tiempo [ES] dia manoratra hoe:
Fony aho mbola ankizivavy (tamin'izaaaany andro izany), ity fetibe ity no tsara indrindra. Tsy nandeha tamin'ny antoandro izahay satria tsy namela ny ankizy kely handeha ny vahoaka, fa amin'ny alina izahay no nandeha, rehefa tonga avy niasa ny mamako ary nandeha nanao ny fitsidihana voalohany izahay. Nanomboka tany amin'ny sehatry ny sakafo izahay ary nisotro “api” (zava-pisotro mafana) misy “pastel” (empanada nendasina miaraka amin'ny hero-dronono (fraomazy). Ny ampahany amin'ireo sakafo miaraka amin'ny hanitra matsirony koa dia nahagaga ahy ny nahita kisoa ginea nivangongo teo anoloan'ny mpijery niaraka tamin'ny loha sy ny rehetra (brrr, mangorintsina aho). Rehefa avy nihinana izahay, dia hanomboka ny fizaràna amin'ny karazana mofomamy sy vatomamy madinika.
Joaquin Cuevas, izay matetika manome ny heviny momba ny lohahevitra manokana amin'ny alalan'ny kisary ao amin'ny bilaoginy El Inofensivo Chico Larva [ES], dia nanapa-kevitra ny hamela ny peniny tamin'ity indray mitoraka ity ary hitondra ny anjara birikiny. Nanohy nitanisa ny antony tokony hanaovana ny Alasitas ho fialantsasatra izy satria ny ankamaroan'ny tanàna no maniry hanatrika izany saingy tsy afaka noho ny asa. Ekeny ihany koa io fiovàna io ka hoy izy nanampy: “Izany no hevitro. Mila manome sary anareo momba ity resaka ity aho. “